बेकरी उद्योगलाई बृहत बनाउने मेरो मुल उद्देश्य हो - Yugantar Khabar | News Portal
बेकरी उद्योगलाई बृहत बनाउने मेरो मुल उद्देश्य हो
Posted on April 15, 2021 by dimdung
योगेन्द्र थापा, युवा व्यवसायी धेरै युवाहरु देशमा रोजगारी नपाएर विदेश धाउनु परेको यथार्थ हामीले देखे, सुने र भोगेकै छौं । देशको विभिन्न परिस्थिति र द्धन्द्धले गर्दा त्यस्तो अवस्था देखिएको भए पनि आज राजनीतिक परिस्थिति सहित शान्पिूर्ण राजनीति देशमा चलिरहेकै छ तर पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना भईरहेको छैन यसो हुनुमा राजनीति प्रतिबद्धता नभएर हो । त्यसरी देशले सोचे जसरी परिणाम निकाल्न सकिरहेको छैन । त्यसरी पढ्ने नपढ्ने वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । मान्छेको जीवनमा सोचे जस्तो कसैलाई हुंदैन । बाउबाजेले भन्ने उत्ति छकि निन्द्रा भन्दा सपना लामो धरै मान्छेमा हुन्छन् तर सफलता पाईरहेका हुंदैनन् । योगेन्द्र यस्ता व्यत्ति हुन् सपना देखे देखेनन् उनैलाई थाहा होला तर निन्द्रामै सफलता पाईरहेका छन् भन्दा हुन्छ । उनले मिहेनत गरे समयले पनि साथ दियो । भगवानले साथ दिए । सकारात्मक सोच राखे । सकारात्मक परिणाम पाईरहेका छन् । विभिन्न उतारचढाव त भोगे नै, संघर्ष त सबैले गर्नैपर्छ योगेन्द्र थापाले संघर्ष गरे संघर्षको फल पनि पाईरहेका छन् । अथवा आफ्नो योजनामा सफलता पाउँदै गईरहेका छन् । योगेन्द्र थापा २०४१ साल भदौ ११ गतेका दिन बुबा स्व. हस्तबहादुर थापा तथा आमा विष्णुमायको कोखबाट त्रिपुरासुन्दरी ३ (साविक मुलपानी गाविस) मुर्चुकबेसीमा जन्मिएका थिए ।
उनी सानैदेखि चञ्चले र छितो छरितो स्वभावका रहेछन् । हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा पनि त्यस्तै देखिनु भयो । अथवा त्यस्तै रुपमा प्रस्तुत हुनु भयो । मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा हुर्केबढेका उनी बुबा फौजीमा हुनुहुन्थ्यो अथवा उनको परिवार फौजीमा संलग्न रहेका छन् । ठुलो दाई तेजबहादुर थापा नेपाली सेनाको सुवीदारमा कार्यरत रहेका छन् भने दिदी ज्ञानु थापा समेत हवल्दार रहनुभएको छ । चार दाजुभाईका उनी माईला हुन् भने एक दिदी रहनु भएको छ । हामी कहाँ २५२ घरधुरी थापा परिवार रहेका छन् । हाम्रो समयमा स्कुल टाढा हुंदा सोचे बामेजिम पढाईलाई निरन्तरता दिन सकिएन । अर्को माओवादी द्धन्दले गर्दा पनि पढाईलाई निरन्तरता दिन कठिन भयो । कष्टकर ढंगबाट पढाईलाई अगाडि बढाउनु पर्यो । हाम्रो फौजी परिवार भएकोले पनि माओवादी द्धन्द्धले असुरक्षित बनाएको थियो ।
हाम्रो परिवारले धेरै कम्युनिष्टहरुलाई पाल्ने काम भयो । माओवादीलाई धेरैको संख्यामा दिनहुं खाना खुवाउनु पर्दथ्यो । माओवादीलाई खाना बस्न दिईरहंदा यता सेनाबाट त्यत्तिकै खतरा । त्यसरी माओवादीलाई सहयोग गर्नु बाध्य थियो । दाई दिदीले आफ्नो तलबबाट २१ प्रतिशत बझाउँनु पर्दथ्यो । तपाई सानैदेखि माओवादी जनयुद्धमा घुलमिल भईरहंदा के भन्थे माओवादीहरु ? आज त्यही बाटोमा हिंडिरहेका छन् त ? थापा भन्छन्, नयाँ नेपाल तथा युग परिवर्तन गर्न हिंडेको भन्थे । वास्तवमा युग नै परिवर्तन नै नगरेको, नभएको भने होईन । राजसंस्थाको अन्त्य गदैै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपाति समावेसी व्यवस्था आयो । तर एउटा कुरा भन्नै पर्छ जनताले नयाँ ढंगले अनुभुति गर्न पाएनन् । शासक वर्गले जनताको बारेमा त सोचेनन् नै पछिल्लो परिवर्तनलाई संस्थागत समेत गर्न सकेनन् ।
अहिले राजनीति रुपमामा स्वतन्त्र रहेको छु । यद्यपी म बाबुुराम भट्राईको फ्यान हुं । उनी अवसर पाउँदा काम गर्न सक्ने व्यक्तित्व हुन् । माओवादी हुंदै नयाँ शक्ति नेपालसम्म काम गरियो तर अहिले कुनै राजनीतिक दलमा सक्रिय छैन । २०६६ देखि ०७७ असोजसम्म विदेशमा रहें । युएइमा लामो समय रोजगारीको सिलसिलामा बसें । मेरो प्रोफेसन बेकरी आईटम उत्पादन र ट्ेनिड दिने थियो । त्यहाँ हिन्दीभाषा भन्दा अंग्रेजीमा जोड गरे । ३ महिनामै अंग्रजी सिकें । इन्डिया केरलाका अल्फ्रेडको प्रेरणा मिल्यो । उहाँले भन्नु भयोकि यदि गोल गर्नुछ भने हिन्दी होईन अंग्रेजी भाषा बोल्नुपर्छ । उनको त्यो कुराले मलाई छोयो । त्यसरी आफुलाई सफलतामा ढाल्दै लगें । मैले काम गर्ने निकै ठुलो सरकारी कम्पनी थियो । एक सय ७२ वटा भन्दा बढी त प्लेन नै थिए । पन्ध्र सय भन्दा बढी नेपाली कामदार थिए ।
झन्दै ११ वर्ष त्यहाँ रहंदा पाँच वटा कम्पनीमा वैधानिक ढंगले काम गरें । नेपाली ३५ हजारमा गएको थिए । पछि महिनाको तीन लाखसम्म मासिक तलव थियो । जस राज्यलाई रेमिट्यानस्मा पनि योगदान भयो । हेल्परमा गएको हुं, हेडचिफसम्म भएर काम गरें । लामो समय त्यहाँ बस्नु भयो । त्यो देश कसरी विकास भएको रहेछ ? सुनाउँछन्, पहिलो त त्यहाँ व्यवस्था संस्थागत भएर देश सिस्टममा चलिरेको छ । राजनीतिक स्थिरता छ भने जनताप्रति जिम्मेवार सरकार रहेको छ । २००८ सालमा आर्थिक मन्दी भयो युएईमा । खाडी तथा त्यहाँको मुख्य आर्थिक एवं आम्दानीको स्रोत भनेको तेल नै हो । त्यसरी आर्थिक मन्दी भएपछि त्यहाँको सरकारले विभिन्न देशसंग व्यवसायिक सम्झौता गर्यो । त्यसपछि अमेरिका जस्ता देश लगायतले ठुलो लगानी गरे । त्यसरी देशलाई फेरी आर्थिक उन्नतीमा लगे । नेपालमा खाली हल्ला मात्र गरिन्छ । नेपाललाई यदि समृद्ध मुलुक बनाउन चाहने हो भने भारतसंग विप्पा सम्झौता भईसकेको छ । अब चीन लगायत नेपालमा लगानी गर्न चाहने देशहरुसंग विप्पा गरी लगानी भित्राउनुपर्दछ । हरेक विषयवस्तुमा शंका मात्र गरेर हुंदैन ।
विदेशमा हुंदा पनि मैले समाजसेवाको काममापनि अगाडि बढें । नेपालमै सामाजिक सेवा र राजनीतिकमा रुची थियो । एक किसिमले नसा बसेकै थियो । त्यहाँ धादिड समाज युएईको आजिवन सदस्य, कार्यसमितिको महासचिव र अध्यक्ष समेत भएर काम गरें । मेरो पालामा त्यहाँ बस्ने नेपालीको उद्धारदेखि विभिन्न कार्यक्रम र संगठन निर्माणमा उल्लेख्य काम भए । १२० जना त आजीवन सदस्य नै बनाएको थिएं । ०७७ असोजमा नेपाल आईसकेपछि देशमै केही गरौं भन्ने रहयो । विदेशमा धरै बसियो, अवसर त धेरै थियो नै । ती सबै छाडेर देशमै काम गर्ने सोच सहित नेपालटारस्थित मिठो बेकरी सुरु गरेको छु । केक, पेस्ट्ज् िे, कुकिज, ब्रेडस् लगायतको उत्पादन तथा व्यापार गरिन्छ । नयाँ भएपनि व्यापार समग्रमा ठिकै छ । अब नेपालकै रैथाने सामानका फुडहरुबाट बेकरी आईटमहरु ल्याउने सोच बनाईसकेको छु । कोदो, सिस्नु, फापर, मकै, जौ, गहुं लगायतका बेकरीहरु बनाउने योजना रहेको छ । अर्को हाम्रो आगामी योजना भनेको तुरुन्तै मिठो बेकरीको ब्रान्च खोल्ने रहेको छ । देशमै स्वरोजगार सहितको रोजगार उत्पादनमा जोड गर्ने रहेको छ । क्याफे, डेरी लगायत खोल्न चाहने साथीभाईहरुलाई सम्पूर्ण प्रकारका तालिम दिन चाहन्छौं । व्यवसायीकरण र रोजगारको निम्ति धेरै संख्यामा ब्रान्चहरु खोल्ने उद्देश्य रहेको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा समेत ट्ेनिड दिने योजना समेत रहेको छ । जन्म, विवाह र मृत्यु मान्छेले जन्मदै लिएर आएका हुन्छन् भनिन्छ । २०६४ सालमै धादिड फुलखर्क निवासी अमुता अधिकारीसंग विवाह भएको हो । एक बाबु परिचित र एक नानी पुष्पाञ्जली रहेका छन् । उनीहरु विद्यालयमा पढिरहेका छन् । उनीहरुलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिने र उनीहरुले नै भने बमोजिमका विषयहरु पढाउने योजना रहेको छ ।
अमेजनलाई ईयूको तथ्याङ्क सुरक्षासम्बन्धी कानून उल्लङ्घन अभियोगमा ८८.६६ करोड अमेरिकी डलर जरिवाना
पैसा कमाउने स्वार्थमा गुणस्तरहीन खाद्य साम्रगी बजारमा
दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सकसंग दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार लैजान आग्रह
फाइभ जी परिक्षणको बाटो खुल्यो
इजरायलले एक हजार नेपाली श्रमिक लैजाने